I-Edeni ka-Lorena - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Lorena
Ikhaya elihle nelinethezekile ekuhambeni ibanga ukusuka enkabeni yedolobha i-Independence efaka inqwaba yezindawo zokudlela nezitolo kanye nemisebenzi ese-Riverfront. Amamayela amabili ukusuka e-WOSU naseMonmouth kanye nemizuzu eyi-15 ukusuka eSalem. Indawo engihlala kuyo ithulile, ihlanzekile futhi inobungani. Nginengadi enhle egcwele izimbali, amakhambi, izithelo nemifino. Zizwe ukhululekile ukwenza isaladi noma itiye. Ikati lami iTiger lihlala lapha futhi lizoza lingene ngomnyango wekati, noma izivakashi zingamkhipha futhi. Uyisithandwa!
Indlu entsha, ehlotshiswe ngokumnandi kodwa imane ihlotshiswe ukuze kwakhiwe isimo sekhaya nesokuphumula. Izingadi eziluhlaza zihlangene nezimbali, amakhambi, izithelo nemifino. Kukhona umpheme ophumule ongemuva onobhavu oshisayo, i-bbq, umgodi womlilo kanye nomgodi wommbila otholakalayo. Jabulela imifino engadini. Ama-hummingbirds, izintaka zegolide nezimvemvane ziningi futhi zijabulisa kakhulu.
Lena indawo yami yokuhlala eyinhloko futhi ikati lami iTiger lihlala lapha ngoba akukhona okwayo ukuthi limhambise phambili naphambili. Uthambile futhi uzimele, kodwa uthanda ukunakwa. Ngigcina izinto eziningi ezibalulekile zokupheka ezitholakalayo. Sicela uhloniphe ukusetshenziswa futhi ufake esikhundleni uma kusetshenziswa amanani amakhulu.
Lena indawo yami yokuhlala eyinhloko futhi ikati lami iTiger lihlala lapha ngoba akukhona okwayo ukuthi limhambise phambili naphambili. Uthambile futhi uzimele, kodwa uthanda ukuna…